दिपशिखाको प्रश्न : विदेशिएका युवा फर्काएर नेपालले कामदार कहिले भित्र्याउने ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more दिपशिखाको प्रश्न : विदेशिएका युवा फर्काएर नेपालले कामदार कहिले भित्र्याउने ?
दिपशिखाको प्रश्न : विदेशिएका युवा फर्काएर नेपालले कामदार कहिले भित्र्याउने ?
जेठ १ गते, २०७६ - १६:३१
काठमाडौं । वाईसियल नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दिपशिखा’ले देशको विकास र समृद्धि गर्न अरबबाट युवाहरु भित्र्याउनु पर्ने बताएका छन् । युवा संघको स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दिपशिखाले देश समृद्ध बनाउन खाडीका युवाहरु नेपालमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
उनले देशलाई समृद्धि तर्फ लैजान अरबका युवा नेपाल ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘विश्वमै सबैभन्दा बढि जनमत भएको पार्टीसँग युवाहरुको अपेक्षा भनेको अबको ५ वर्षमा युवाहरु बाहिर पठाउने होइन् यो देशको विकास र समृद्धिको लागि अरबबाट नेपाल यूवा ल्याउन सकियोस् । खाडीका युवाहरु नेपालमा ल्याउने व्यवस्था गरियोस्, हामी त्यो चाहन्छौं ।’
अध्यक्ष दिपशिखाले यूवाहरु विदेश जानुको मुख्य कारक दलाल अर्थतन्त्र भएको बताएका छन् । उनले दलाल अर्थतन्त्रलाई समाप्त नगरी यूवाहरुको भविष्य सुनिश्चित नहुने बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा देखिएको दलाल अर्थव्यवस्थाले युवाहरुलाई विदेशिन बाध्य पारेको समेत प्रष्ट्याए ।
उनले भने, ‘कृषकले १० रुपियाँ केजीमा उत्पादन गरेको बन्दा उपभोक्ताले ४० रुपियाँमा किनेर खाएको छ ।’ दिपशिखाले २० रुपियाँ सिधै खाने विचौलियालाई किन कारबाही नगरेको भनि सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । ‘१० रुपियाँमा उत्पादन भएको बन्दा ४० रुपियाँमा कृषकले किनेर खान्छ । २० को २० कहाँ गयो ? तिनलाई समात्ने कि नसमात्ने ? म हाम्रो पार्टी, हाम्रो नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु । कालीमाटीका दलालहरुलाई समात्न यो सरकार तयार छ कि छैन् ?’
उनले बन्दाको मुल्यको पछाडि यूवाहरु विदेश जानुको बाध्यता जोडिएको उल्लेख गरे । ‘तपाईंहरुलाई लाग्ला बन्दाको कुरा किन गरेको ? युवा विदेश जानुको पछाडि बन्दाको मुल्यको आधार छ, खै बुझेको ?’
उनले कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुगेपछि कौशलता प्रदर्शन गर्न नसकेको समेत टिप्पणी गरेका छन् । विश्वमै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखिएको यो समस्या हल गर्न नेकपा नेतृत्वलाई समेत दिपशिखाले आग्रह गरे । ‘जब कम्युनिष्टहरु सत्तामा पुग्छन्, जब जनतालाई शासन गर्ने तथा अधिकार दिने ठाउँमा पुग्छन् त्यतिबेला कम्युनिष्टहरुले कौशलता प्रदर्शन गर्न सकिरहेका छैनन् भनेर प्रश्न उठिरहेको छ ।’
‘हामी यूवाहरुले के–के सहयोग गर्नुपर्छ, सहयोग गर्न तयार छौं । कहाँ कहाँ त्याग गर्नुपर्छ त्याग गर्न तयार छौं । हामीले भनेको समाजवाद, हामीले भनेको सत्ता कस्तो हो ?’ उनले प्रश्न गरे । अहिले पनि सरकारी निकायमा भ्रष्टचार व्याप्त भैरहेको भन्दै दिपशिखाले कम्युनिष्ट सरकारले अरुले भन्दा फरक गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे ।
जेठ १ गते, २०७६ - १६:३१ मा प्रकाशित